သောင်းပြောင်းထွေလာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 422
ရွှေရိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ တချို့က ပြောကြတယ်။ ပါရမီက ရွှေထွက်တယ်ဆိုပဲ။ ဘာလဲ မိန်းမဆီက ရွှေတွေထွက်သွားတာလားလို့ မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ ပါရမီတက္ကစီ မောင်းချင်ရင်တော့ စပေါ်ငွေ လာထား ၁၅ သိန်း၊ လစာက ၄ သိန်း။ အရင်က စပေါ်ငွေကို အရစ်ကျပေးရတယ်။ အခုတော့ မဟုတ်တော့ တပေါင်းတည်း ပေးရတယ်။ အရစ်ကျစနစ်ဆိုတာ ပထမလ ၃ သိန်း၊ ဒုတိယ နှစ်သိန်း၊ နောက်လ ၃ သိန်း၊ နောက် ၂ သိန်းနဲ့ ၆ လပြည့်အောင် မြဝတီဘဏ်မှာသွင်းရတယ်။ လစာကလည်း အရင်က ၃သိန်း။ နောက်တော့ ဈေးတက်သွားပြီး ၄ သိန်း ဖြစ်သွားရော။ ကားကိုတော့ မနက် ၅...
Cartoon Saw Ngo – ဥပဒေထက်မှာ သူပဲ ရှိတယ်
ကာတွန်း စောငို – ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Cartoon Nay Myo Aye – ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုးမြှင့်ရေး
ကာတွန်းနေမျိုးအေး – ဆင်းရဲမွဲတေမှု တိုးမြှင့်ရေး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Cartoon Saw Ngo – အ၀ီဇိနဲ့ ၀စိပိတ်
ကာတွန်း စောငို – ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ခရိုနီကြီး …. မိုနိုပိုလီ .. လုပ်တာ ချစ်လို့ ချစ်လို့
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း – ကူမိုးကြိုး ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 422 of 423«1...419420421422423»
ပြန်တော်ပျံတဦး၏ အာလူးမှတ်တမ်း (TheGeek)